Kooxaha Bixinta Goobta Shaqada - Cuntooyinka Gargaarka
Kooxaha Bixinta Goobta Shaqada
Ma waxaad raadineysaa fursad iskaa wax u qabso oo shaqo oo saameyn weyn ku leh bulshadaada, oo ay fududahay in la hirgeliyo lana maareeyo, oo waa wax ay shaqaaluhu sameyn karaan saacadda qadada? Hadday sidaas tahay, keenista cuntadu waa fursadda iskaa wax u qabso ee adiga iyo dadka la shaqeeyaba!
Waxay qaadataa oo keliya saacad qado ah in cunno loo geeyo siddeed ilaa 10 qof oo u baahan. Sidee taasi ugu tahay qado awood leh? Bilaabidda Kooxda Bixinta Goobta Shaqada waa fursad si-fudud loo hirgelin karo oo iskaa wax u qabso ah oo adiga iyo shirkaddaada ah si aad wax uga beddesho nolosha waayeelka iyo kuwa naafada ah ee bulshadaada.
Bixinta cunnadu waa fursad weyn oo koox-dhisid ah oo u baahan kaliya koox ka kooban laba ama in ka badan oo shaqsiyadeed si ay u bilaabaan. Shirkadaha sida 3M, Xcel Energy, General Mills iyo Thrivent Financial for Lutherans waxay dayactireen Kooxaha Bixinta Goobta Shaqada muddo sanado ah maxaa yeelay shaqaaluhu waxay qaataan qaabkan fudud ee wax ku oolka ah ee lagu caawinayo xubnaha bulshada ee u baahan.
Si loo bilaabo Maanta Kooxda Bixinta Goobta Shaqada, buuxi foomkeena internetka ama nagala soo xiriir (612) 623-3363 si aad wax badan uga barato sida shirkaddaadu uga faa'iideysan karto fursaddan tabaruce ee goobta shaqada ku habboon.
Su'aalaha Badbaadinta Shaqada ee Goobta Shaqada
Waqti intee le'eg ayaan ku qaadan doonaa keenista cuntada?
Wadadaadu waxay ku lug yeelan doontaa qiyaastii hal saac oo ah waqtiga dhalmada oo lagu daray waqtigaaga u safridda iyo ka soo noqoshada goobta qaadista cuntada.
Immisa qof ayey ku qaadataa in la bilaabo Kooxda Bixinta Goobta Shaqada?
Waxay qaadataa laba kaliya in la bilaabo! Kooxaha Bixinta Goobta Shaqada wey ku kala duwanaan karaan cabirkooda labo ilaa 200 waxaadna ku dari kartaa shaqaale tabaruceyaal cusub waqti kasta.
Immisa jeer ayey kooxuhu geynayaan cunto?
Si kastaba ha noqotee badanaa waxaad jeclaan lahayd-bishiiba mar, toddobaad kasta, ama toddobaad kasta! Waxaad go'aansan kartaa inaad bilowdo gaarsiinta bil kasta hal mar oo aad keento wax badan haddii jadwalkaagu kuu oggol yahay. Waan kula shaqeyn doonnaa si aan u sameyno jadwal u shaqeeya shirkaddaada.
Nidaamka gudbinta wuxuu qaadanayaa saacad ama wax ka yar. Iyada oo leh 35 meelood oo alaab-qeybinta dhammaan magaalooyinka Mataanaha ah, waxaa lagugu laabi doonaa mid u dhow goobtaada shaqada.
Ayaa qabanqaabiya Kooxda Bixinta Goobta Shaqada?
Waxay u shaqeysaa sida ugu fiican si loogu magacaabo hogaamiye kooxeed kaas oo ah meesha ugu muhiimsan ee lala xiriiro isla markaana abaabula jadwalka bixinta shirkaddaada. Qofkani wuxuu u shaqeyn doonaa sida isku xiraha shirkaddaada iyo shaqaalaha Meals on Wheels.
Maxay yihiin faa'iidooyinka cunno gaarsiinta shirkaddeyda?
Bixinta cunnadu waa fursad mutadawacnimo oo dhammaystiran oo u baahan waqti ugu yar oo lagu qaato meel ka baxsan goobta shaqada waxayna ka caawisaa urur lagu kalsoon yahay oo si wanaagsan loo ixtiraamo oo u adeegaya bulshooyinka Twin Cities in ka badan 40 sano. Sidoo kale waa fursad dhisme kooxeed aad u wanaagsan shirkadaha qaarna waxay u isticmaalaan bixinta cuntada fursad ay ku xirmaan shaqaalaha hadda jira iyo howlgabnimada shaqaalahooda oo wali tabaruc ah.
Cunto miyaan la siin doonaa qof ila shaqeeya?
Haa, Inta badan Kooxaha Gaarsiinta Goobta Shaqadu waxay u shaqeeyaan koox labo ah si shaqaaluhu fursad ugu helaan inay wada shaqeeyaan.
Ka waran haddii shaqaaluhu u bixin karin cuntada sida jadwalka loo qabtay?
Quruxda Kooxaha Gaarsiinta Goobta Shaqada waa xubin kale oo kooxda ka tirsanaan kara oo wax u qaban kara qof aan wax bixin karin. Haddii aadan buuxin karin booska, la xiriir cuntadaada xubinta shaqaalaha Wheels waqtiga kahor si ay u diyaarsadaan caawimaad dheeraad ah.
Ma jiraan ilo dhaqaale oo aan la wadaagi karo dadka go'aannada gaara ama la shaqeeya shirkaddayda?
Haa! Waxaan ku bixinaa dhowr ilo oo si fudud loola wadaagi karo dadka kale goobtaada shaqada:
A Tilmaanta Kooxda Bixinta Goobta Shaqada kaas oo ka hadlaya sida loo bilaabo koox iyo sida hawsha gudbintu u shaqayso.
A bandhigid oo ku saabsan sameynta Koox Gaarsiinta Goobta Shaqada
A video oo ku saabsan faa'iidooyinka bilaabida Kooxda Bixinta Goobta Shaqada
Bilaabida Kooxda Geynta Goobta Shaqada
Baro sida aad ku bilaabi karto Kooxda Bixinta Goobta Shaqada iyo inaad ka caawiso dadka shirkaddaada ah inay ku soo biiraan.
Kooxda Gaarsiinta Goobta Shaqada Isqor
Ma xiiseyneysaa inaad bilowdo Kooxda Gaarsiinta Goobta Shaqada? Buuxi foomkan si aad u bilowdo.